Etu ị ga-esi kekọrịta obere akaụntụ na Aromaeasy - ndị na-ere ihe n'ahịa maka mmanụ dị mkpa | AromaEasy
Etu esi kenye otu akaụntụ sub-Aromaeasy
Biko mezue usoro ise a dị mfe iji kesaa obere akaụntụ nke Shopify gị na Aromaeasy.
nbanye Shopify akaụntụ - Ntọala — Akaụntụ
2. Tinye ndị ọrụ na akaụntụ
3. Dejupụta ozi ahụ
Aha mbu: Aromaeasy
Họrọ nhọrọ 4:
“Iwu” “Dezie iwu” “Ngwaahịa” “Ngwa”
4. Tinye ngwa “Dianxiaomi” na ụlọ ahịa Shopify
“Dianxiaomi” ngwa: pịa ebe a
5. Ziga ozi na Aromaeasy
Ị mere nke ọma.
Anyị mere “ọrụ ruru unyi, yabụ ị nwere ike ilekwasị anya na ahịa ahụ!
Aromaeasy ga-emezigharị ntọala njikọta n’ime awa iri anọ na asatọ.
ga-ezitere gị nkwenye email mgbe anyị mechara ya.